Boston Celtics (114-105) oo Garaacay Washington Wizards – Radio Daljir
May 16, 2017 3:00 b 1
Boston Celtics ayaa saaka (xalay saqda dhexe waqtiga USA) si xarrago leh uga ka adkaaday Washington Wizards una gudbay wareega hore ee horyaalka NBA-da. Celtics (53-29) ayaa martigelin doona Cavaliers maadaama ay ka guula badnaayeen Cleveland Cavaliers (51-31) sidaas darteed Cavaliers waa u sawaxanka TD Garden-ka Boston.
Saadaasha waxay u janjeertaa dhanka Cleveland Cavaliers. Si kasta ha ahaatee, kooxdii soo baxda waxay la ciyaari doontaa horyaalka Xeebta Galbeed oo hadda ay isku hayaan Golden State Warriors iyo San Antonio Spurs. Saadaasha dhanka galbeedka ayana waxay u janjeertaa Warriors.
Haddii ay saadaashu rumoowda, waxaa sannadkii labaad ee horyaalka NBA-da ku loolami doona isla labadii kooxood ee sannadkii hore, oo koobka horyaalkuna hadda gacanta ugu jiro LeBron James iyo Cleveland Cavaliers.
Radio Daljir kala soco.
daljir waa idaacad dhexdhexaad ah